China Mfe Solid Wood High na Low Side Cabinet Nchekwa Cabinet # 0024 rụpụta na Factory | Yamazonhome
Mkpụrụ osisi dị larịị nke dị larịị na nke dị ala dị larịị # 0024
Aha: Ime ụlọ ebe obibi
Nọmba nlereanya: Amac-0024
Size: Pịnye A: 400 × 450 × 800mm
Pịnye B: 400 × 450 × 1050mm
Isi etiti bụ osisi oak dị elu
Ọ bụghị osisi niile ka a na-akpọ oak ọcha. "Oroma a mụrụ na Huainan bụ oroma, ebe ndị amụrụ na Huaibei bụ oroma." Ọ bụ ezie na osisi oak bụ otu ezinụlọ dị ka oak na-acha ọcha, n'ihi mmachi nke ihu igwe na gburugburu ebe ọ na-etolite, mkpụrụ osisi ya dị warara, ahịrị ojii, na ụcha. Mgbe ị na-ahọrọ ezigbo osisi akpu, ihe kachasị mma ga-abụ nnukwu osisi oak, a na-ejikwa arịa dị iche iche anyị mepụtara nke nnukwu osisi oak nke North America na-enweghị akpụkpọ anụ.
Ime drawer ohere
Oghere drawer ahụ mechiri emechi na-enyere gị aka idozi ma chekwaa ya, ma na-echekwa nzuzo gị. The uzo imewe nke drawer ahụ na-enye gị amara nke nchekwa. Ime dị larịị na nke dị larịị, a gaghị asacha ya ọ bụrụgodị na i yiwe uwe dị nro na ya.
Akara nkuku na akuku na udiri ahu
Onye mmebe ahụ nwetara mmụọ sitere na arịa Korea wee jikọta njirimara nke arịa ụlọ China iji mepụta ngwa ụlọ Nordic. Dị dị mfe na nke siri ike, usoro osisi oak mara mma, na-agbaji dullness, enweghịkwa ọmarịcha ịma mma n'ịdị mfe. Structurekpụrụ ọdịnala nke tenon na-mortise na-ewetara gị ụwa na ụwa nkịtị.
Obi ike osisi tilt kabinet ụkwụ
The oké siri ike osisi tilt kabinet ụkwụ e mere na a ezi uche tilt n'akuku dị ka ibu e ji mara nke kabinet, nke enwekwu ndị amị ikike. White oak si United States nwere ihe mara mma nakawa etu esi, ọgaranya udidi, obere agba dị iche, na okokụre osisi agba bụ eke na-adị ọcha. Enweghi oke icho mma na mgbochi, a na-ejikwa osisi siri ike dị ọcha mee ihe ahụ, a na-ebelata ihe ndozi dị ka arcs a pịrị apị. Usoro ndị dị mfe na-akọwa mma nke ịdị mfe.
A na-eji ihe eji esere osisi eme ihe duru
N'ime drọwa ahụ na-anabata okporo ụzọ ntuziaka osisi, nke anaghị adị mfe mmebi, na ka eji ya eme ihe, ọ ga-adịkwu nro. Ulldọrọ ihe anaghị agba mbọ ma ọ naghị eweta mkpọtụ.
Nordic style siri ike mmanya wine kabinet
Nordic style siri ike mmanya wine kabinet, ngosi nchekwa, ma ornamental uru na nchekwa ọrụ. Enwere uzo abụọ ị ga - ahọrọ. Nnukwu mbadamba ahụ ziri ezi na ihe eji eme ihe dị adị. Open spraying na-echekwa udidi nke akpu na oke, ị nwekwara ike ịnwe mmetụta nke egwu na aka.
Nke gara aga: Sup Surfboard Brush Kwuru Guzosie Padle Board 0370
Osote: Elu àgwà thickened sọfụfụ lepụrụ anya ihe SUP paddle osisi 0371
Lọ ịwụ Cablọ Nche Cabinet
Nkuku Nchekwa Cabinet
Kitchen pantiri Nchekwa Cabinet
Ebe nchekwa kichin
N'èzí Nchekwa Cabinet
Rolling Nchekwa Cabinet
Nchekwa Cabinet Waterproof
Utility Nchekwa Cabinet
Osisi Nchekwa Osisi
Mfe Casual Now Isiokwu na ụkwụ, Mini Solid ...
Home Sweet 2-Ọkwa Small Animal Modular Habitat ...